Shiinaha Customized 4U server jiifku server - - warshad - Goldenor Electronic Technology Co., Ltd.
Hoyga >Alaabta >Gawaarida adeegga>4U jiifka server
4U 36HDD Chassis Server
Waxyaabaha: 1.0-1.2 mm qaro weyn oo xoog badan oo bir ah (SGCC);
midabka: Dhegaha dacwadda waxaa lagu dubay budo madow, jirka jirkiisana kiiska ugu weyn lama rinjiyeyn;
wadis adag: 36 * 3.5 "wadis adag oo lagu beddeli karo"
Xaddiga kordhinta: 1. HT04702-36BAY daaqadda gadaal ee moduleka kaarka furaha toosan;
(qaabeynta): 2. HT04702 -36BAY isku dhafka qalabka korantada oo siyaado ah;
4U 12HDD Chassis Server
Waxyaabaha: â € 0. 0.8-1.2 mm qaro weyn oo xoog leh oo bir birta ah (SGCC); â € â
midabka: â € The Dhagaha shamiska waxaa lagu dubay budo madow, qeybta hore waxaa lagu dubay budo madow, jirka mashiinka weynna lama rinjiyeynin;
drive adag: â € € 12 * 3.5 "wadis adag oo lagu beddeli karo adag"
Xaddiga kordhinta: (qaabeynta) 1. Qalabka kaarka ah ee koronto-ku-xirnaanta ee daaqadda dambe; 2. Isku-darka qalabka korontada ee isku-dhafan; 3. Isku darka qalabka korontada ku shaqeeya;
midabka: Dhagaha shamiska waxaa lagu dubay budo madow, jirka jiifkana lama rinjiyeynin;
darawal adag: Heerka 20 * 3.5 inji saxaarad kulul oo lagu beddeli karo iyo Heer 2 * 2.5 inji ah oo adag oo deg deg ah leh sii deyn iyo xarig xarig ah
Nidaamka qaboojinta: Taageerada 3 dhexe 120 * 38 taageere Taageer 2 gadaal 80 * 25 taageere
darawal adag: Jaangooyo 20 * 3.5 inji ah oo saxaarad kulul lagu beddeli karo
Nidaamka qaboojinta: Taageerada 3 bartamaha # 12038 taageere Taageer 2 gadaal 80 * 25 taageere